ဆောင်းပါးများ – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါးလုံး လန်းဆန်း ကြည်လင် မှုမရှိတဲ့ ယောဂီ တစ်ယောက်ဟာ ရှုစိတ် မငြိမ် နိုင်ပါ ဘူး။ရှုစိတ်မငြိမ်ရင် ရုပ်သဘော နာမ်သဘောတွေကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါဆို ငြိမ်အောင် ဘယ် လိုလုပ်ရမလဲ? အရင်ဆုံး တရား မထိုင်ခင် မိမိ…
ချစ်စရာပုံလေးတွေမြင်ရင် တောင်းယူ ထား တတ်ပါ တယ်။ ကြည့် စမ်းပါ ဦး။ သစ်ရွက် ခြောက် ကြွေ လေး။ ဘာမှတန်ဖိုး မရှိ တော့ဘူး လား။ သစ်ရွက်ခြောက်လေးက ကြွေနေတာ ကြွပ်နေပြီ။ တက်…
#အာနာပါန ကျင့် စဉ် သည် အ လွန် ရှေး ကျ သော တရား ကျင့် စဉ် တစ် ခု ဖြစ် သည်။ #သမထ Samatha (calm and…
မနက်အစောကြီး ၃နာရီဆိုနိုးရတယ်။၃နာရီ၃ဝမှာ တန်းစီရတယ်လေ။ ၃နာရီ၄၅မှာ ဓမ္မာရုံကြီးထဲ ရောက်ပါပြီ။ တရား မတက်ခင် ကထိုင်လျှက်အိပ်ပျော်သွားတတ်ပေမယ့် တရား တက်ပြီး ဉာဏ် စင်အဆင့်ဆင့်ဆို မအိပ်တော့ပါပဲ။တစ်နာရီခွဲအချိန်ဘယ်လိုကုန်သွားတယ်မသိလိုက်ပါဘူး။ ၅နာ ရီ ၁၅ဝန်း ကျင်မှာ ဆွမ်းစား ဆောင်ကြီးမှာ…
ပုတီးနှင့် သမထအတွေးများ ပုတီးစိတ်၊ အာနာပါန ကျင့် စတဲ့ သမာဓိအလုပ်၊ သမထအလုပ်ပိုင်း တွေ လုပ်တာ နဲ့ ပတ်သက် လို့ မျှဝေချင် တာပါ။ ကုသိုလ် ရတယ်၊ အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုရုံတင် မကဘဲ နေ့တဓူဝ…
Jan 23, 2021 Hein Zaw Oo
ဟုတ်ကဲ့၊ အာနာပါန မှတ်လို့ကောင်းတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ နိမိတ်မပေါ်လို့ စိတ်မသာယာ ဖြစ်ဘူးတယ် ၊ဘာဆက်လုပ်ရ မည်လဲခင်ဗျ? နိမိတ်ပေါ်လျင် အာနာပါန မမှတ်ဘဲ နိမိတ်ကို လိုက်ကြည့်မိတယ် ၊နိမိတ် ပျောက်သွားတယ်၊ ဘာလုပ် ရ မည်လဲ၊ လမ်း…
ပုံမှန်ဆို စာရေးသူက မေတ္တာကို ဘယ်လိုလေး ပို့လေ့ ရှိပါသလဲ ဆိုရင်ဖြင့် တရားထိုင်သလို ထိုင် လိုက် ပါတယ်။ ပြီးလျှင် ရှေးဦးစွာ ပြုဖွယ် ကိစ္စ မှန်သမျှ ပြုလုပ်ပြီး ပါလျှင် မိမိ ၏…
ကျွန်မက ငွေကြေးချမ်းသာမှု နည်းပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချမ်းသာမှုများ ပါတယ်။ ငွေကြေး နဲ့ စိတ်ချမ်း သာမှုကို အချိူး ချိူး မယ်ဆို 25:75ပြောရ ပါမယ်။ စိတ်ချမ်း သာမှူက75% လောက် ရှိ…
Jan 22, 2021 Hein Zaw Oo
သံသယပျောက်ပါစေအမှန်ဘဝရောက်ပါစေ==သံသယပျောက်ပါစေအမှန် ဘဝ ရောက် ရောက်ပါ စေလေသီချင်း ဆိုချင်တာ မဟုတ် ပါဘူး။ နိမိတ် မေး ချိန်ဆို။ ဘုရား ဖူးချိန်ဆို ယောဂီ တို့ရဲ့ သံသယ တွေ မြင်ရ တဲ့အခါ သံသယ…
ကျန် ခဲ့ တဲ့ ၆ နှစ် ခန့် က နေ့ စဉ် ရက် ဆက် မိုး ကုပ် ဆရာ တော် ကြီး တ ရား တွေ နာ…